DOWNLOAD HIASM 4.4 - MMEMME NYOCHA - 2019
Mgbe ụfọdụ kọmputa gị nwere ike iji ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ n'enweghị ihe mgbochi. N'ihi nke a, nchekwa nke data gị na-ata, dịka ndị ọrụ nwere ike ịlele ozi nzuzo. Otú ọ dị, e nwere ngwọta ngwanrọ pụrụ iche iji kwụsị nke a.
Mmemme iji gbochie ịnweta ngwa na-enye gị ohere igbochi nsonye nke ngwanrọ ọ bụla na PC gị. Onye ọrụ ahụ agaghị enwe ike ịmalite ngwa nke a si egbochi ya ruo mgbe ị gbanyụọ mkpọchi ahụ, ị ​​nwere ike iwepu mkpọchi mgbe ịchọrọ ụfọdụ mmemme.
Mgbochi ọsọ ọsọ
Usoro a nwere ike igbochi ọ bụghị naanị ngwanrọ ndị ọzọ, kamakwa disks (ike, ezi uche, na ihe ndị ọzọ). Enweghị paswọọdụ ọ bụla na ya, dịka na AskAdmin, mana ọ na-eji nlezianya arụ ọrụ ya. Ngwaahịa a nwere otutu ọrụ maka ụdị ngwá ọrụ ndị a, mana ekele maka asụsụ Russian abụghị nke siri ike nghọta ha.
Download ngwa ngwa na-agba ọsọ
Ọrụ dị na usoro a dị nnọọ obere karịa nke gara aga, mana mkpọchi ahụ na-arụ ọrụ dika o kwesịrị. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ ị ga-eji bọtịnụ Explorer reboot, ebe ọ bụ na usoro anaghị azaghachi ọrụ niile nke ngwaọrụ a.
Nanị ihe omume a ga-arụnyere site na ndepụta niile dị n'isiokwu a, ihe ndị ọzọ zuru oke. A na-ekesa ngwaahịa a n'efu, dị ka ọtụtụ edere n'isiokwu a, mana itinye mgbakwunye ngwa na ndepụta nke ndị egbochi bụ ihe na-adịghị mma, nke na-eduga n'ọtụtụ nsogbu. Tụkwasị na nke ahụ, ọ nwere ọrụ ole na ole na enweghị nchedo onwe ya.
Otu n'ime mmemme kachasị mma na ịrụ ọrụ maka igbochi ngwa. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ nile dị na Simple Run Blocker. Ihe dị iche bụ paswọọdụ ntọala, Otú ọ dị, njirimara a dị na nsụgharị ụgwọ.
Onye nkwado usoro
Ọrụ nke usoro a dị iche na nke ndị ọzọ na isiokwu a. Ọ bụrụ na ngwọta niile dị n'elu ahụ kpamkpam egbochiri ohere iji ngwa, mgbe nke a na-enye gị ohere ịmepụta paswọọdụ igba egbe. N'ezie, asụsụ Russian agaghị adị ụba, ma ọbụghị na-enweghị ya, ọ bụ naanị iji chọpụta ihe ọrụ na otu.
Download Prolock Blocker
Ya mere, anyị nyochaa ndepụta nke ngwanrọ ngwanrọ kachasị mma ma dị mfe maka igbochi mmemme ndị ọzọ. Onye ọ bụla n'ime ha nwere atụmatụ pụrụ iche, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịchọta n'etiti ha ihe na-adọrọ ya mma. Olee ngwá ọrụ ị na-egbochi ịnweta ngwa?